Simbi inoputika mumoto we crucible uye induction inotora simbi inopisa inopisa
musha / Induction Inoyunguta Moto / Metal Melting Furnace / Iron Inonyungudutsa Crucible Vira
Iron Inonyorera Crucible Furnace
Categories: Electric Furnace, Igbt tilting induction yakanyungudusa chira, Induction Inoyunguta Moto, Metal Melting Furnace, Sirimbi Iron Melting Furnace Tags: tenga simbi inoputika scrap furnace, kutura simbi kunyauka, kutura simbi kunyavira mukati mevira, furnace iron yakanyauka, simbi inoputika muchero we crucible, simbi inoputika muchero we crucible kutengeswa, simbi inoyungunuka muchero unotengesa moto, simbi inoputika mukati mevira, melting cast cast iron furnace, kunyunguduka kushandiswa kwesimbi induction furnace, kusungisa iron induction furnace
Iron Inonyorera Crucible Moto |
1) Nguva Yakawandisa Yakagadzirirwa simbi yakagadzirwa nesimbi inotonhorera moto
2) Dhigiriyuta yakazara yekutonga kwepamusoro uye yakarurama
3) Kunyorera simbi, simbi, simbi isina chinogadzirwa, simbi, aluminium
4) 0.15-20 toni simba
5) Nguva dzose simba rinobuda, rinokurumidza kusunguka, rakanaka rekugonesa magetsi.
6) Sirifu shell furnace sangano, hydraulic tilting.
3.Ukushandisa: Pakati pevhu Inhizha inoputika inopisa moto inonzi crucible inonyanya kushandiswa mukunyungudzwa kwesimbi, simbi, mhangura, aluminium uye alloy, ine kunyanya kushandiswa kwemagetsi, kushandiswa kwemagetsi zvakanaka, kushandiswa kwemagetsi kwakashata, kupera kwekutsvaira, kukurumidza kutonhorera kumhepo, kutonhora kushanduka kwekushisa, yakakodzera kumarudzi ose esimbi yakanyunguduka.
4.Characters uye Kubatsira:
1) Nguva dzose simba rinobuda, rinokurumidza kusunguka, rakanaka rekugonesa magetsi.
2) Zero-voltage sweep-frequency style inotanga, inogadziriswa kune zvinodiwa zvekutanga kutanga.
3) Kuita zvakakwana kuchengetedza mabasa, zvakadai sekuchengetedzwa kwepamusoro-soro, kuchengetedzwa kwemhepo, kuchengetedzwa kwemazuva ano, kudzivirira-kuvhara, kudzivirirwa kwemvura, nekudzivirirwa kusingagadziriswi, zvigadzirwa zvinotenderera zvichienderana nepamusoro pekunyungudutswa kwechimbichimbi.
4) Zviri nyore kushanda, yakakodzera iyo yose yekukanda.
Turi rimwechete rinonyunguduka nguva inogona kukurumidza se <40 maminetsi! Simba chinhu chevira rinogara richisvika padanho repamusoro (≧ 0.96)!
Munguva yekuputika, pasinei nokuti mamiriro echoto chinoshanduka sei, simba remasvikiro rinowedzera rinopa nguva dzose simba rinobuda. Izvi zvinoreva kuti, kunze kwebhenekeri yekugadzirisa maitiro, iyo yose inobva pakufuta kusvika pakuguma, simba rinenge riri mukati-kati rinopa simba richagara richikwanisa kuunza simba guru muvira.
Kunyanya kukwikwidza simba simba rinoshandiswa (index yakagadzirwa pamusoro pe530 kwh / T)! Inofananidzwa nemafanana akafanana inverter simba simba kuchengetedza nezve 20%.
Kuzadzikisa nyika yehurmonic yezvino uye gorozi inobvumirwa kukosha!
Kushandisa-full-wave rectifier power supply series, mubasa rose rekushandura rinogara riri munzvimbo yakasununguka yakazara (yakaenzana nekodzero yekugadzirisa diode), haibatsiri humonic yakakwirira, yakasvibiswa nehutachiona kumagetsi emagetsi, haipindi kushanda kwechikamu chekuita simba rekugadzirisa masimba kubhadhari.
firs-class induction coil design inogona kupedza kukanganisa kweail.
Iyo induction coil kurasikirwa kwepakati frequency iron inoputika crucible furnace ye25% yesimba rose, saka sasiyanisi nemagadzirirwo emagetsi epiil anokosha zvikuru. Kana tichigadzira coil, tinoshandisa tU1 anoxia shavha yepamusoro mumhangura yealuminiyumu, uye pamwe chete wekilori inogamuchira mashekeri esirivha akareba, ayo ane hutsika hwakanaka uye kurasikirwa kuduku. Kuti Uve nechokwadi chekutarisa kwakanakisa kwekutendeuka, kushandiswa kwezvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakati pekutendeuka, kuvhara kwemazinga kunoshandiswa uye huwandu hwemagetsi ehupfumi hunowanikwa.
Muchitevere & Kuchengetedzwa Kwemagariro
Yakakwirira yepamusoro yechinhu chisarudzo chekugadzirisa kuchengetedza kwemidziyo.
①Itauririrwa nepamusoro yehavha isina carbon-free uye 304 simbi inosimbisa simbi: yakasimba!
②Optical fiber transmission inverter trigger inotapira ipeni yeriniti: simba rakasimba rekudzivisa kupindira uye kushanda kwakasimba
③Mhando yepamusoro inokosha yakakura yomupepeti yako Thyristor, nzvimbo yepamusoro yemvura inotonhora radiator (HengYang Patent Nha.): Shandisa zviri nyore!
④Customized capacitor: yakagadziriswa sarudzo, yakachengetedzwa yakachengeteka kunze kwekombe, achishandisa simba rakakura re magnesium aluminium alloy, rinopesana ne-corrosion uye rinogara rakasimba.
⑤Kuchengetedza mhangura yebhandi: Mhangura, yakasvibirira mhangura inogona kuderedza kupererwa kwehuni uye kuchengetedza simba! Mhangura sandblasted pamusoro uye kupikisa-anti-oxidation kupfeka, hutano hwepamusoro hunoita kuti huve hunoita, kutaridzika hakuperi uye kunowedzera kunaka!
⑥Ikushandura (kuchinjana) shandura: kana vira rinotsiviwa kana rikanganiswa, zvinogona kudzora simba rakakonzerwa nevira umo pasina kuchinja kushanda kweimwe furimi. Iyo yakagadzirirwa kuchengeteka uye kunamatira.
⑦Plate kupisa kwekushandura (HengYang Patent Nhamba): kuongorora kutonhora kwemaji inotonhorera mumidziyo, uye kudzivirira mvura yakananga yakabuda kunze kupinda musimba. Kuchengetedza kuderedza kusakosha kwemishini.
Kandira simbi inonyungudika muvira wechipfuva uchishandisa chamupupuri uye padivi kukwezva kupisa- kuchengetedza chivharo chevira, guruva hood (mhete) kuburikidza neimwe mweya inonanzva guruva, gasi remarara rinogadzirwa mukunyungudika, kusvika nekuvandudza mhedzisiro yekubuda kwechisimba, kusangana nezvinodiwa zvemamiriro ekunze. kuongorora dhizaini.
Kuiswa kweMagetsi (50 / 60HZ) Power output Iko rinodhura simba (KWH / T)
EAF rudzi rweTyuni furnace simba Rated simba (KW) Incoming voltage (V) Incoming line current (A) Kudzokorora kunotora nhamba Rectifier transformer simba (KVA) DC voltage (V) Tarisa ikozvino (A) Pakati pevhesi yenguva (V) Intermediate frequency KHZ Kunyorera nguva (Min) Simbi Tsvuku dzendarira Brass aruminiyamu
GW – 0.35T 250 380 400 6 Chikamu chechitatu 315 500 500 750 1 20-45 560 420 390 540
GW – 0.5T 350 380 560 6 Chikamu chechitatu 400 500 700 750 0.8 30-50 550 410 380 530
GW – 0.75T 500 380 800 6 Chikamu chechitatu 630 500 1000 750 0.8 40-50 550 410 380 530
Chikamu chechitatu 1000
Kaviri katatu 1250
Chikamu chechitatu 1250
Chikamu chechitatu 1800
Kaviri katatu 1800
GW – 3T 2000 750 820 12 Kaviri katatu 2500 990 1010 1480 0.5 50-70 510 370 340 490
GW – 5T 3000 950 1140 12 Kaviri katatu 4000 1260 1190 1900 0.3 50-80 500 360 330 480
GW – 10T 6000 950 2280 12 Kaviri katatu 8000 1260 2380 1900 0.3 50-90 490 350 320 470
GW – 15T 8000 950 1520 24 10000 yechina nhatu 1260 1590 1900 0.3 50-90 480 340 310 460
GW – 20T 10000 950 1900 24 12500 yechina nhatu 1260 1980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
GW – 30T 15000 950 2850 24 20000 yechina nhatu 1260 2980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
T-tembiricha tembiricha: Simbi 1650, Yakakanda simbi 1450, Tsvuku yendarira 1150, Brass 1000, Aluminium 700, Zinc 400
※ Kubwinya kwesimbi yamagetsi kunyorera muchinjiro wevira kunobva pauwandu hwesimbi 7.8 (iyo mashizha ealuminium 2.7, saka inonzi aluminium yakaenzana neyero yakaenzana: simba rinoenderana naro rakafanana, uye simba rinoda x 3 nguva dzomuviri wevira )
※ Nguva yakanyunguduka uye matani emashandisi emagetsi ane ukama hunokosha nemichina inobatanidza simba, chimiro chakasvibirira, kuwanda kwezvinhu zvakasvibiswa, unyanzvi hwevashandi,
※ Mune fomu iri pamusoro, iyo "ton simba rekushandisa (kwh / T)" inyowani nyowani yekushandisa simba, iyo inopedza 15% kana anopfuura emagetsi mu Common zvakafanana IF magetsi emagetsi.
Configuration Midziyo yekumisikidza: yepakati frequency magetsi emagetsi, capacitor kabati, muviri wevira (simbi ganda kana aluminium goko), hydraulic chiteshi (kana chinodzora) inodzora sisitimu, tambo yemvura inotonhora nezvimwe;
※ I-Above ndiyo yakagadzirwa nemhando yemhando, inogona kusimbisa simba rakasiyana maererano nekutengeswa kwevashandi, kwete-standard yemiti yakasiyana nekunyanya kushanduka.
Small Portable Gold Gold Flaming